Home Wararka Diyaarada drones ka Mareykanka ayaa duqeyn ka geestay Jubada Hoose
Diyaaradaha nooca Droniska ee Ciidanka Mareykanka ayaa saacadihii lasoo dhaafay duqeyn ka fuliyay deegaan ku yaalla Galbeedka Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose.
Duqeyntaas ayaa waxaa ay ka dhacday deegaanka Beer-xaani ee duleedka Kismaayo, isla markaana waxaa la sheegay in lala eegtay xubin kamid ah dagaalamayaasha Al-shabaab oo halkaas ku sugnaa.
Taliska Ciidanka Mareykanka ee qaaradda Afrika ee AFRICOM ayaa War kasoo saaray duqeyntii ka dhacday galbeedka Kismaayo, iyagoona sheegtay in halkaas ay ku dileen xubin ka tirsan Al-shabaab.
Sidoo kale Qoraal kasoo baxay AFRICOM ayaa waxaa u sheegeen in duqeynta aysan wax Khasaaro dhimasho ah kasoo gaarin dadka rayidka ahaa ee goobta ka Agdhawaa.
Inta iyo markii uu bilowday sanadkan Cusub ee 2020 Mareykanka ayaa waxaa uu gudaha dalka Soomaaliya ka fuliyay ilaa iyo lix duqeymood, kuwaasi oo qaarkood la sheegay in lagu dilay xubno ka tirsan Al-shabaab.